किन नजाने बङ्गलादेश घुम्न ? – Kanak Mani Dixit
हिमाल खबरपत्रिका (१६–३१ साउन ,२०५९ )बाट
छिमेकी राष्ट्र बङ्गलादेश नेपालको दक्षिणपूर्वी कुनाबाट ३० किलोमिटर मात्र टाढा छ । धेरै वर्षको प्रयासपछि पाँच वर्ष पहिले भारतीय भू–भाग भएर काकडभिट्टाबाट फुलवारी हुँदै बङ्गलादेशको बङ्गलाबन्धसम्म सामान ढुवानी गर्न पाउने अनुमति पनि नेपाललाई प्राप्त भइसकेको छ । तर पनि नेपाल र बङ्गलादेशबीच निजी गाडी चल्दैनन् । मानिसका विचारमा “बाटो खराब छ”, “भारतले अनुमति दिँदैन”, “बङ्गलादेशमा बाढी आउँछ” र यस्तै अरू केही अनुमानहरू ।
सेमिनार र सभाका निम्ति काठमाडौँ–ढाका आउने–जानेहरू प्रायः हवाईजहाज नै चढ्ने गर्छन् । बङ्गलादेशमा पढ्न जाने हजारौँ नेपालीमध्ये केहीचाहिँ ठाउँ ठाउँमा बस र ट्याक्सी चढ्दै यही भूमार्ग नै प्रयोग गर्छन् । हामी ‘बिटल’ कारमा जान आट्यौँ । यो अनौठो आकारको कारको पहिलो मोडल सन् १९३० को दशकमा एडल्फ हिट्लर स्वयंले ‘भोक्सवागन’ (जनताको गाडी) नामाकरण गरेर उद्घाटन गरेका हुन् । मुसाको आकार परेको यो कार नेपाली बाटोघाटोमा चाहिँ ‘भ्यागुते गाडी’ भनेर चिनिन्छ ।
धेरै अगाडिदेखि यो लेखकको आफ्नो “पुरातात्विक” चाहिँ भन्न नमिलिहाल्ने भक्स्वागन “बिटल” कार काठमाडौँदेखि ढाका हाँक्ने रहर थियो । अघिल्लो महिना जोरपाटीमा रहेको स्पाइनल इन्जरी पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालनको निम्ति रकमको आवश्यकता पर्यो । त्यो आवश्यकता पूरा गर्न ‘बिटल’ को ढाका–काठमाडौँ यात्रालाई “फण्ड रेजिङ्ग ड्राइभ” को रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेँ । काठमाडौँ–ढाकाबीचको १२०० किमिको दूरीलाई साथीभाइ र अन्य हितैषीबाट प्रति किमि रु.१००० को दरमा पैसा उठाई जोरपाटी केन्द्रलाई अरू तीन–चार महिना चलाउन सक्ने लक्ष्य बनाइयो । कुरिनटार नपुग्दै हाम्रो भ्यागुते गाडी ।भारतको छोटो दूरी पार गर्न लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासबाट कागजात पास गराउन केही कष्ट भएन । बङ्गलादेशमा भने नेपाली कार जाँदै नजाने गरेकोले महाराजगञ्जको दूतावासमा अलिकति भनसुन गर्नुपर्यो, जब कि अरूले जाने चेष्टा गरे भने यो पनि सजिलो हुने देखियो । भारतबाट बङ्गलादेश छिर्ने अनुमति बङ्गलादेश दूतावासबाट प्राप्त हुनासाथ त हामी बाटो लाग्न तैयार भइहाल्यौँ । २८ असारमा छोरी हिमाली, भतिजो मिकु र म स्पाइनल इन्जरी केन्द्र जोरपाटीबाट फूलमालासहित विदा भयौँ । थोरै नै भए पनि साहस चाहिने बाटोमा सबै राम्रो गराइदिनका लागि मित्र र ‘नववाद्य’ कलाकार सलिल सुवेदीले अष्ट्रेलियायी आदिवासीको आफ्नो वाद्ययन्त्र ‘डिजरीडू’ फुक्दै तीनचोटि बिटलको परिक्रमा गरे ।
रिङ्गरोड काठमाडौँ उपत्यका छाड्न धेरै समय लाग्यो, फोहोर, खचाखच । कताबाट हो किन हो, एउटा पूरै गोबर भरिएको बडेमानको ट्रकले हाम्रो अगाडि बाटै नछोडी चाबहिलदेखि कलङ्कीसम्मै साथ दियो । गोबर भने फ्ल्यात फ्ल्यात गर्दै हाम्रो बाटो सुगन्धित पार्दै झ्र्दै गर्यो त्यो ट्रकबाट ।
ठीक छ, गोबरै त हो, साइत नै पर्यो भन्दै थानकोटको बाटो लाग्यौँ । सदा झैँ, गत २५ वर्षमा करोडौँ अरू नेपाली यात्रुले झैँ पूर्व (काकडभिट्टा) जान पहिले हामी पश्चिम (नारायणगढ) लाग्यौँ । अक्सर रात्रिबसमा हिँडेको यो बाटोमा दिउँसो हिँड्दा चितवनको भित्रिमधेशदेखि पूर्वी नेपालको तराईसम्म बाटोको छेउमा मात्रै भए पनि सालको जङ्गल अझ्ै रहेको देख्ता आनन्द लाग्यो ।
अमलेखगञ्ज नजिक बाटोमा तगारो हाल्ने सिपाहीले निहुरिँदै सोधेः “कता जान लाग्नु भा’को ?” “बङ्गलादेश ।” “ए बङ्गलादेश ? जानुस् ।” हाम्रो बाङ्ला ‘एस्कर्ट’ सँग बेलुकीपख बोगुरा शहरतर्फ लाग्दै ।ती प्रहरीको व्यवहार यति सहज लाग्यो; मानौँ दिनदिनै वीरगञ्ज र विराटनगर जाने जस्तै यो बाटोबाट गाडीहरू ढाका पनि जाँदा हुन् । हुनुपर्ने त त्यस्तै हो । तर बङ्गलादेश भनेको गरीबीको अखाडा भन्ने विदेशी दातृ संस्थाले पारिदिएको छापले हाम्रो मन भरिदिएको छ । त्यसैले त्यो छिमेक देश ‘घुम्न जाने’ विचार नै हाम्रो मनमा पलाउँदैन । यसको असर त हामी नेपालीलाई नै पर्दछ, किनभने न बङ्गाली उच्च संस्कृतिसँग हामी परिचित हुन्छौँ, न त बङ्गला देशले गरेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासको बारेमा नै हामी जान्ने गर्छौँ । गरीब त हामी भयौँ यसो गर्दा ।
बङ्गलादेशको कुरा गरे पनि हामी अझै नेपालमै थियौँ । मनसुनी याममा बडेमान भएका खोलाहरू नाघ्दै पूर्व लागियो, पहिला सप्तगण्डकी मिसिएको नारायणी अनि रापती, बागमती, कमला र कोशी पार गर्दै गएका नदीहरूलाई मनमनै भनियो, “बङ्गलादेशमा भेटिहालिन्छ नि !”
रात पर्दा इटहरी, जहाँ एउटा बबुरो ‘चोर’ लाई दुई पुलिस जवानले लत्याउँदै ल्याए । हाम्रो बिटल कारको पछाडिको ‘बुट’ खोल्दै गर्दा फेला परेको रे । राति कफ्र्यू लागेको बेला पुलिस र सिपाही जताततै हिँड्ने बेलामा पनि बिटलको ‘बूट’ खोल्न हिम्मत गर्ने त्यो ‘चोर’ आँटिलो रहेछ जस्तो लाग्यो, तर यो बिटलको ‘डिकी’ अगाडि हुन्छ, पछाडि त रेडिएटर नभई चल्ने ‘एयरकूल’ इन्जिन हुन्छ भन्ने कसैले बताइदिएनछ । उनलाई नाजायज उत्पीडन नहोस्, भन्ने विचार गर्दै भोलिपल्ट हामी बिहानै काकडभिट्टातर्फ लाग्यौँ । भन्सारको हाकिमले त कान्तिपुर पढ्दै रहेछन्, “भर्खर तपाईंको यात्राबारे पढ्दैथिएँ, तपाईं त आइपुगिसक्नुभएछ ।” मेची पार गर्दै, जङ्गे स्तम्भलाई सलाम ठोक्दै भारत पसियो, तर पुग्नुथियो नजिकैको बङ्गलादेश । भारत सिमानामा, कस्टम र इमिग्रेशन दुवैमा नेपाली भाषी अफिसर सा’वहरू “बङ्गलादेश जाने” भनेपछि अलि अक्मकिए, तर हाम्रो उचित कागजात छँदैथियो, सजिलै बाटो लाग्यौँ ।
सिमानादेखि दक्षिण एसियाको माओवादी उद्गमस्थल नक्सलवारीसम्म बाटो बिग्रन दिइएको जस्तो लाग्यो, नत्र राम्रो हाइवेमा हाम्रो बिटलले जोशिन पायो । सिलिगुडी, मैनागुडी पार गर्दै, फुलवारी पुग्यौँ । यो नेपालबाट नजिक पनि पर्छ, तर बङ्गलादेश सरकारले अलिपरको नाका खोलेको छ, च्याङ्ग्राबन्धामा । च्याङ्ग्रा त कतै देखिएन, तर नेपालको तराई र भारतको ‘चिकन्स् नेक’ (नेपाल–बङ्गलादेशले साँघुरो पारेको क्षेत्र) देखि ढाकासम्म नै बाटोमा बाख्रा नै बाख्रा देखिए । सिजन नै रहेछ कि क्या हो; ठूला बाख्रा, साना बाख्रा र पाठा, र सबैको ध्याउन्न एउटै– आफ्नो गर्धनलाई बाटोको रोडामा सुत्दै कन्याउने !
च्याङ्ग्राबन्धामा पनि भन्सार र अध्यागमन कार्यालयमा नेपाली भाषी कर्मचारी नै थिए । उहीहरू र बोर्डर सेक्युरिटी फोर्सका जवानलाई पनि कागजात देखाई हामी बङ्गलादेश र भारतबीचको ‘दश गजा’ छिर्यौँ, जो झ्ण्डै आधा किमिको थियो । पारिपट्टि बङ्गलादेशको बुडीमारीमा हाम्रो जस्तै चारवटा बिटल हामीलाई कुरिरहेको देख्यौँ, र हामीलाई स्वागत गर्न अगाडि बढे बङ्गलादेश भक्स्वागन क्लबका अध्यक्ष र सदस्यहरू, जुबेर, राजु, जायद र मुर्ताजा । यी ‘ऐतिहासिककाल’का बिटल हाँक्ने सबैमा एक किसिमको समवेदनशीलता हुन्छ, जसले गर्दा तुरुन्तै मित्रता गाँसिइहाल्छ । हामीबीच पनि त्यस्तै भयो ।
बुडीमारीको एउटा ढाबामा रमाउँदै हामीले दिउँसोको खाना खायौँ– एउटा कुनामा नेटीभीको शनिबारको हिन्दी सिनेमा आइरहेको थियो । अनि चार रंगीविरंगी बिटल– एउटा नेपाली र दुई वटा बाङ्ला–उत्तर बङ्गलाका हरिया खेतबीच कुदाउँदै हामी दक्षिण लाग्यौँ । एकताकाका सशक्त जनरल मोहमद हुसैन अर्साद यही उत्तरी रंगपुर इलाकाको भएकोले यहाँको बाटो खुब राम्रो बनाएका थिए र आज पनि बिग्रेको छैन । जताततै हाम्रो बाटोमा रातो–सेतो नम्बर प्लेट र ढोकामा लेखिएको “स्पाइनल इन्जरी संघ नेपाल”ले बङ्गलादेशीलाई तान्यो । रोकेको बेलामा हाम्रो वरिपरि हुल जम्मा भइहाल्थ्यो ।
इटहरीबाट हिँडेको रात बोगुरा भन्ने उत्तर बङ्गालको कृषि क्षेत्रको माझ्मा रहेको शहरमा ढाका बिटलवाला मित्रहरूसँग हामीले बितायौँ । बेलुकी नेपालमा भएको भए बियर र रक्सीको सेवनसहित स्वागत भोज हुन्थ्यो भने ती भलाद्मी बङ्गालीहरूलाई रमाइलो गर्न केही चाहिँदो रहेनछ । मीठो माछाको तरकारी र भात भए पुग्यो । पहिला त मलाई मेरो बिटलबारे उनीहरूले केरकार गरे– तिम्रो टायरको हावा कति पि.एस.आई, रियरभ्यू मिरर त ‘अरिजिनल हैन नि’, कुन स्पार्क प्लग चलाउँछौ ? धेरै कुराको जवाफ मसित थिएन । उनीहरू भने बिटल कारहरूको बखान गर्दै र यसको सानोतिनो कुरामा लामो छलफल गर्दै घण्टौँ बिताउन सक्ने ! बियर पिउनै नपर्ने ।
भोलिपल्ट फेरि राजु भाइको १६०० सीसीको ‘सुपर बिटल’ को पछि रेस गर्दै फेरि हामी ढाकातर्फ कुद्यौँ । हाइवे त झ्न् राम्रो हुँदै गयो, करीब युरोपेली स्तरको भन्न सकिने, अनि हामी बङ्गलादेशीहरूले गर्व गर्ने बङ्गबन्धु–सेतुमा आइपुग्यौँ । ५ किलोमिटर लामो यो पुलले समुद्रजस्तो चौडा देखिने ब्रह्मपुत्र नदीलाई नाघ्दछ । यसलाई ‘जमुना ब्रिज’ पनि भन्दछन् किनभने यहाँ ब्रह्मपुत्रलाई जमुना भन्दछन्, गङ्गालाई पद्मा (पोद्धा) र दुईको सङ्गम पछिको भयङ्कर नदीको नाम हो मेघना । यो पुललाई बनाउन त पहाडको रासको ढुङ्गा चाहिने, तर बङ्गलादेशमा खाली माटो मात्र भएकोले सबै ढुङ्गा राँची नजिक बिहारबाट रेलमा लेराएको रे ।
जमुना पार गरेपछि ढाका नजिकै आइपुगियो । त्यहाँ राजधानीबाट तीन वटा अरू बिटल हामीलाई भेट्न आइपुगे । त्यसपछि ६ वटा भ्यागुते गाडीले हामीलाई ‘एस्कर्ट’ गर्दै ढाकाको स्पाइनल इन्जरी पुनस्र्थापना केन्द्रमा पुर्याए । त्यहाँको एउटा सभागृहमा २०० दर्शक कुरिरहेका रहेछन्, जसमध्ये आधा त ह्वीलचेयर र ह्वील स्टे«चरमा रहेका प्यारालाइज भएका विरामीहरू । हाम्रो गाडीलाई स्टेजमै पुर्याउने निर्देशन आयो र हाम्रो निलो बिटल सबै अगाडि पुग्यो र अभिवादन पायो । पछाडि भित्तामा “फिनिश लाईन” भनेर हाम्रो काठमाडौँदेखिको यात्राको सङ्केत थियो । स्वागत भाषण भयो र मेरो पनि त्यो बाङ्गला जमात सामु बोल्ने पालो आयो ।
मैले हामी काठमाडौँदेखि ढाकामा स्पाइनल इन्जरी ट्रिटमेन्ट सम्बन्धी सिक्न आएको कुरा बताएँ र दुई वर्षअघि पदयात्रा गर्दाखेरिको आफ्नो दुर्घटना तथा उपचार र पुनस्र्थापनाको कथा सुनाएँ । अनि दुई देशबीचको स्पाइनल इन्जरी सम्बन्धी फरक सन्दर्भ बताएँः “बङ्गलादेशमा भीरबाट खसेर ढाड भाँच्न सकिँदैन; किनभने यहाँ भीर पहाड नै छैन । कतै खसियो भने पनि माटैमा भासिने हो, तर हामीकहाँ त चट्टानसँग जुध्नुपर्छ । नेपालमा कतै भीरपाखामा लड्न पुगियो भने कसैले फेलै नपार्ने डर पनि छ भने यस्तो जनघनत्व भएको यो देशमा त त्यसको पीर नै भएन ।” हामीकहाँ त ठूल्ठूलो हेलिकप्टर र जहाज हराउँदा पनि फेला पर्दैनन्, तर मैले त्यो त्यहाँ भनिनँ ।
यसैगरी हाम्रो काठमाडौँ–ढाका यात्रा टुङ्गियो । यो यात्राले मलाई दिएको मौन सन्देश चाहिँ; दुई देशबीचको बाटो राम्रो छ, ढाकाको सांस्कृतिक रहनसहन उत्कृष्ट छ, बङ्गलादेशीहरूले आधुनिकीकरणसँग जसरी मुकाविला गरेका छन्, त्यसबाट हामी सिक्न सक्छौँ, बैंकक र सिङ्गापुर ताक्ने नेपालीले ढाका पनि हेर्न गए हुन्छ भन्ने हो । कम खर्चिलो देश, उच्च आदर्श र संस्कृतिले प्रेरित समाज तथा नेपाली भनेपछि हुरुक्कै हुने बाङ्लादेशीहरू । उसो भए बसमा गुडेरै भए पनि किन नजाने ढाका आउँदो हेमन्त या हिउँदमा ? कक्सेस बजारको संसारको सबैभन्दा लामो ‘बिच’, अनि सुन्दरवनमा दुई–तीन दिनको नाउको सयर । अनि ढाकामा उत्कृष्ट किनमेल, खानपिन र सुमधुर बङ्गाली सङ्गीत । हामी त गयौँ भ्यागुते गाडीमा अर्कै काम लिएर । तर उही भूमार्गको बाटो भएर फर्किएपछि पनि हाम्रो सन्देश भने यही छ– बङ्गलादेश घुम्न किन नजाने ?